As of Mon, 13 Jul, 2020 19:40
भेडालाई चरन अभाव
रुकुमपूर्वमा व्यावसायिक रूपमा पालिँदै आएको भेडापालन व्यवसाय खुला चरण क्षेत्रको अभावका संकटमा पर्दै गएको छ । रुकुमपूर्वका सिस्ने, राङ्सी, काँक्री, रन्मामैकोट र तकसेरालगायतका मगर बस्तीमा पालिने भेडालाई आवश्यक चरणको अभाव भएपछि व्यवसाय नै समस्यामा पर्दै गएको हो ।
साउनदेखि उपत्यकामा बक्सअफिस
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा भइरहेको र हल सञ्चालकको अवरोधका कारण विवादित बनेको ‘बक्सअफिस’ प्रणालीमा अन्ततः सहमति जुटेको छ । चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघ तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग भएको छलफलपछि १७ बुँदे सहमति भएको छ । जसअनुसार साउन १ देखि उपत्यका र फागुन १ देखि देशभरका हलमा बक्सअफिस लागू गर्ने सहमति भएको हो ।
माटोबिना तरकारी खेती कत्तिको सम्भव होला ? माटोको प्रयोगबिना नै तरकारी उब्जाउ हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा पत्याउन पनि गा¥हो । सुन्दै अचम्मलाग्दो माटोबिनाको खेती भनेपछि पानीमा गर्ने हो कि, हावामा पो गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो ।
कर्मचारी नहुदा स्थानीय तहको कामकाज ठप्प
बाजुराका स्थानीय तहमा कार्मचारी नहुदा दैनिक कामकाजमा समस्या भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध महिला
छाउपडी कुप्रथा, महिला र घरेलु हिंसाका कारण सिंगो अछाम नै बदनाम भइरहेका बेला यसविरुद्ध अभियान सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश नं ७ पूर्ण खुल्ला दिसामुक्त घोषणा
प्रदेश नं. ७ को कैलाली आइतबारदेखि पूर्णरूपमा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको प्रमुख आतिथ्यमा एक कार्यक्रम अयोजना गरी कैलाली जिल्ला पूर्णरूपमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
सामुदायिक विद्युत् महासंघमा ज्ञवाली
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको पाचांै राष्ट्रिय महाधिवेशनले नारायण ज्ञवालीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन गरेको छ ।
कारोबारकर्मी चौलागाईं पुरस्कृत
कारोबार राष्ट्रिय दैनिकका खोटाङ संवाददाता उत्तम चौलागार्इं उद्योग वाणिज्य पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघको नवौं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको समीक्षालय हलमा भएको कार्यक्रममा चौलागाईं वाणिज्य पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन् ।
रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो प्रदर्शन
वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो आइतबार जावलाखेल मैदानमा प्रदर्शन गरिएको छ । भोटो जात्रा हेर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जावलाखेल पुगेका थिए ।
स्थानीय तहमा बेथिती : घुस र भाले भोजको बिगबिगी
जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा संचालन गरिएका योजनाको बजेटमा स्थानीय तहका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिले मनपरी गरेको पाइएको छ ।
नगरवासीलाई निःशुल्क नक्सा
भूकम्पले भत्केको घर बनाउन गोरखा नगरवासीले निःशुल्क नक्सा बनाउन पाउने भएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा यूएनडीपी नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना अन्तर्गत गोरखा नगरपालिकामा स्थापना गरेको सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण नक्सा पास स्टुडियोमार्फत निःशुल्क नक्सा बनाइने भएको हो ।
तरकारीमा व्यापारीको आफूखुसी मूल्य
उदयपुरका गाईघाट, बेल्टार, कटारी, जलजले लगायतका बजारमा तरकारीको मूल्यमा व्यापारीको मनपरी चलेको छ । चाडपर्वको बेलामौकामा अनुगमन गर्ने निकाय चाडपर्वपछि वेखबर हुँदा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य तरकारीको मूल्य आफूखुसी राख्ने गरेका हुन् । जसलेगर्दा मूल्य पसलैपिच्छे फरक र दैनिकजसो वृद्धि हुने गरेको छ ।
‘हिन्दू कार्ड’ फाल्न मोदीलाई अवसर
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणबाट ‘एक ढुंगाबाट दुई चरा मार’ हान्न सफल भएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार मोदीले भारतको कर्नाटकमा भइरहेको विधानसभा चुनावका लागि प्रचार र नेपालमा हिन्दूवादी राजनीतिको कार्ड फालेर भारतीय जनता पार्टीको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)सँगको बढ्दै गएको दूरी घटाउनेसम्मको राजनीति गर्न यो भ्रमणबाट सफलता पाएका हुन् ।
धनकुटा नगरपालिकाले आवास सहुलियत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्र विपन्न, असहाय र एकल महिलालाई घर छाउने जस्तापाता वितरण सुरु गरेको छ ।
क्षमताभन्दा तेब्बर कैदिबन्दी हुँदा समस्या
क्षमताभन्दा तेब्बर कैदिबन्दी राखिएपछि जिल्ला कारगारका बन्दीलाई समस्या भएको छ । २५ पुरुष र १० महिला गरी ३५ जनामात्र अट्ने कारागारमा ९८ जना कैदीबन्दी राखिएपछि समस्या भएको चौकीदार जितेन्द्र कार्कीले बताए । “कैदीबन्दी बढी भएपछि विद्युत्, खानेपानी र स्वास्थ्य उपचारमा समस्या हुन्छ,” उनले भने, “सबैभन्दा बढी सुत्नका लागि समस्या छ ।”